Indlu eluhlaza, A BARACCA DU PEI
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguEvelina
Indlu ikumgangatho omnye kwaye inokufikelela ngokuzimeleyo.
Ngaphakathi kwendlu kukho indawo yokuhlala enekhitshi, itafile yokutyela kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini. Kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese, i-bidet kunye nesinki.
Le ndlu inethayile ejonge elwandle, indawo yokosa inyama kunye netafile yokutyela ngaphandle. Indlu yonke ifakwe ngendlela yale mihla.
Indlu eluhlaza ine-terrace enhle ye-semicircular enombono wolwandle!
Igumbi linebhedi ephindwe kabini kwaye igumbi lokuhlambela libandakanya isinki, ishawa, indlu yangasese kunye ne-bidet (kukho umatshini wokuhlamba ngaphandle kwendawo yokuhlala ekwabelwana ngayo nabanye abathengi). Indawo yokuhlala ibandakanya ibhedi yesofa ephindwe kabini, ikhitshi kunye netafile yokutyela.
I-terrace ilungele isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa ehlotyeni!
Amanyathelo ambalwa ukusuka endlwini kukho ichibi lokuqubha elihle elixhotyiswe ngenkqubo yokufudumeza kunye nezibane zasebusuku.
Ulwandle olukufutshane lwe-Oneglia, kunye nolwandle olumangalisayo lwamatye, iingqalutye kunye namatye, kunye nezo zasePorto Maurizio, ubukhulu becala, zinesanti, zinokufikelelwa zombini ngemoto kunye nezithuthi zikawonkewonke. Imizuzu emihlanu ngemoto okanye ngebhasi unokufikelela kumbindi wesixeko, izibuko lezorhwebo, imarike egqunyiweyo, iivenkile ezinkulu, iivenkile kunye neeklabhu ezininzi, iibhari, iindawo zokutyela, iibhari zokuphumla elwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Evelina
Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi ngo-Airbnb, ngefowuni okanye nge-imeyile.